Construction to Resume Soon on Dawei SEZ
Construction at Dawei Special Economic Zone is set to resume soon as the government and developer Italian-Thai Development have made changes to the contractual arrangements for the development of the industrial estate that comprises the initial phase of the project. The Dawei Special Economic Zone Management Committee revealed...
Myanmar creates over 21,000 jobs in June
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် The Ministry of Labour, Immigration and Population’s employment data for June shows the creation of 21,098 jobs-1,188 by the government and the rest by the private sector, while the country sent 20 people to work in other countries. The ministry said it has been helping people to find...
The govt purchases 6,300 tons of reserve rice
မြန်မာလို အောက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် The government of Myanmar started purchasing rice to keep asareserve on April 30 and has, as of May 11, purchased 6,300 tons of rice, now stored in five storage facilities in the country. The Ministry of Commerce and Myanmar Rice Federation jointly take the reponsibility of...
English Text Below မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာမည့် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံလုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၊ အတည်ပြုမိန့်နှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားသည့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကော်မရှင်တွင် လျှောက်လွှာများ လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက ၀န်ဆောင်ခနှုန်းထားများကို ၅၀% လျှော့ချ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ထိုကဲ့သို့ လျှော့ချကောက်ခံရခြင်းမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အသုံးစရိတ်များ လျှော့ချပြီး လုပ်ငန်းများ ပိုမိုအဆင်ပြေစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက် မူလ ကောက်ခံသည့် နှုန်းထားထက် လျှော့ချကောက်ခံခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ လျှော့ချကောက်ခံမှုသည် COVID 19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့်ကာလ နိုင်ငံတော် ကြေညာချက်အရ သက်ရောက်မှုရှိသည့် ကာလအထိသာ အကျုံး၀င်မည်ဖြစ်ပြီး ကြေညာထားသည့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက နှုန်းထားများကို...
Local banks close some branches amid COVID-19 pademic
သွားလာမှုကန့်သတ်ထားသည့် မြို့နယ်များမှ ဘဏ်ခွဲများကို ပိတ်ထားမည် English version available down below. Covid-19 ကြောင့် သွားလာမှုကန့်သတ်ထားသည့် မြို့နယ်များအတွင်းရှိ ဘဏ်ခွဲများကို ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်နှင့် ငွေလွှဲ ဝန်ဆောင်မှုများကိုသာ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ သိရသည်။ ယခု ဧပြီ ၂၀ ရက်တွင် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီး အသွားအလာကန့်သတ်တားမြစ်ခြင်း (lock down) ပြုလုပ်ထားသည့် ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ပုလဲကွန်ဒိုရှိ ဘဏ်ခွဲ၏ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ခေတ္တရပ် ဆိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း KBZ ဘဏ်မှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ထိုပြင် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများ လိုအပ်သည့် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည့် ATM၊KBZ pay KBZ iBanking KBZ mBanking စသည့် ဒီဂျစ်တယ်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို...
Zin Thu Tun State-run Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) and MPRL E&P Company signed two contracts for an offshore gas project in block A-6 on December 16, one for production sharing and the other for gas production and distribution. Meanwhile, Union Minister of Electricity and Energy U Win Khaing sounded...
MNA to fly special flights to Singapore
Myanmar National Airlines will start flying special flights to Singapore every Thursday starting from December 10. The airline said that it will not sell the ticket for the flights through its authorized agents. Instead, it will sell the tickets online to the earliest passengers. The passengers, who want to fly to...